April 2020 - Myanmar Sports Villages
ဘောလုံးကွင်းတွေဟာ ဘယ်သောအခါမှ အနှစ်သာရကင်းမဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး #မော်ရင်ဟို
၂၀၁၉-၂၀ ရာသီကို အပြီးသတ်ဖို့ မျှော်လင့်ထားသလို၊ ပရိသတ် မပါဝင်တဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေဟာ ဘယ်သောအခါမှ တန်ဖိုးမဲ့သွားခြင်းမျိုးမရှိကြောင်း တော့တင်ဟမ်နည်းပြ မော်ရင်ဟိုက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဘောလုံးပွဲများ ပြန်လည်ကျင်းပမယ်ဆိုရင်တောင် ပရိသတ်များဟာ ကွင်းထဲအထိ လာရောက်အားပေးခွင့် ရမှာမဟုတ်ပဲ ရုပ်မြင်သံကြားမှတဆင့် အားပေးသွားရဖို့ရှိပါတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားမှတဆင့် အားပေးနေခြင်းကြောင့် ကွင်းထဲမှာ ပရိသတ်များမရှိပေမယ့် ဘောလုံးပွဲရသဟာ ပျောက်ဆုံးသွားမှာမဟုတ်ပဲ ရှိမြဲအတိုင်း ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း မော်ရင်ဟိုက ပြောပါတယ်။ စပါးစ်အသင်းဟာ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲတွင် RB လပ်ဇစ်အသင်းကို အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အနားယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီအဆုံးထိ ကစားသွားဖို့အတွက် စပါးစ်အသင်းမှာ ၉ ပွဲလောက်ကျန်ပါသေးတယ်။ ဒီ ၉ ပွဲဟာ စပါးစ်အတွက် အလွန်အရေးပါနေပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ “ဒီလက်ကျန် ၉ ပွဲစလုံး ကစားခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့...
လီဗာပူးလ်တစ်သင်းလုံးဟာ ဗန်ဒိုက်အပေါ်မှာ မှီခိုပြုနေရသည်ဟု မိုက်ကယ်အိုဝင် သုံးသပ်
လီဗာပူးလ်အသင်း၏ နောက်ခံလူ ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်ဟာ ရှေ့တန်းကစားသမားများဖြစ်သည့် မာနေးလ်၊ ဆာလတ်ချ် နှင့် ဖာမီနို သုံးဦးတို့ထက်ပို၍ အရေးပါသလို၊ ဂျာဂင်ကလော့ပ်ရဲ့ ကစားကွက်မှာလည်း မဟာဗျူဟာမြောက် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ လီဗာပူးလ်ကစားသမားဟောင်း မိုက်ကယ်အိုဝင်က သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ တချိန်တုန်းက နောက်တန်းနှင့် ဂိုးသမား ပြသာနာကြောင့် အတော်လေးရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အယ်လီဆွန် နှင့် ဗန်ဒိုက်တို့ရောက်လာချိန်မှာတော့ အဆိုပါ ပြသာနာဟာ ငြိမ်းချမ်းသွားခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိုပါသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဗန်ဒိုက်နှင့် ပတ်သတ်၍ “ကောင်းပြီ၊ ဒီမေးခွန်းက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ လီဗာပူးလ်ဟာ အချိန်အခိုက်တန့်တစ်ခုလောက် ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ ဂျာဂင်ကလော့ပ်ရောက်လာတယ်။ ‘ဗဟိုခံစစ်မှူး နဲ့ ဂိုးသမားကောင်းကောင်းမရှိတာဟာ ငါတို့အတွက် အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ်ဆိုတာ’ ကို ကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ ဒီပြသာနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ဈေးကွက်ထဲကို ဝင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဗန်ဒိုက်နဲ့ အယ်လီဆွန်ဆိုတဲ့ ၂ ယောက် ရလာခဲ့တယ်။...
စီးရီးအေကို မဖြစ်မနေ ပြန်စမယ်လို့ ကြုံးဝါးသွားခဲသည့် အီတလီဘောလုံးဖက်ဒရေးရှင်း ဥက္ကဌ
FIGC ခေါ် အီတလီဘောလုံးဖက်ဒရေးရှင်း ၏ ဥက္ကဌ ဂါဘရီလီဂရာဗီနာက စီးရီးအေပြိုင်ပွဲကို မဖြစ်မနေပြန်စရမှာဖြစ်သလို၊ တကယ်လို့ ဒီရာသီကို အခုအနေအထာအတိုင်း အဆုံးသတ်လိုက်ပါက အီတလီဘောလုံးလောကကို သတ်သလိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ အီတလီစီးရီးအေဘောလုံးပွဲများဟာ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လကတည်းက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ခေတ္တရပ်နားထားရပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ် အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာတော့ အီတလီဝန်ကြီးချုပ် ဂူစပီကွန်တီဟာ လာမည့် မေလ ၁၄ ရက်နေ့မှာတော့ အီတလီပရိုလိဂ်များကို ပြန်လည် စတင်ဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှိုးဆော်ချက်ကို ဂရာဗီနာကိုယ်တိုင်က ထောက်ခံသွားခဲ့ပြီး ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြိုင်ပွဲကို ပြန်ကစားရမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော် FIGC ရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်နေသရွှေ့တော့ လက်ရှိရာသီကို လုံးဝအဆုံးသတ်သွားဖို့ မစဉ်းစားပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီဆိုရင် အီတလီဘောလုံးလောကကို သတ်သလိုဖြစ်သွားမှာပါ။ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကို ကျွန်တော် ခြုံပြီး စဉ်းစားပြီးပါပြီ။ ထပ်ပြောမယ်နော် ၊ ဒီရာသီကို ဘယ်လိုမှ...
Warning!!! ထရိန်နင်းဆင်းရမည့် ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမားများအတွက် အစိုးရမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ……
မကြာခင်အချိန်တွင်းမှာပင် ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်များအားလုံးဟာ ထရိန်နင်းကွင်းထဲသို့ ပြန်လည်ရောက်လာပါတော့မယ်။ ဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ ကာလအတန်ကြာဝေးကွာနေတဲ့ ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်း ဇွန်လအတွင်း ပြန်လည်ကြည့်ရှုခံစားခွင့်ရပါတော့မယ်။ ဘောလုံးပွဲများမကျင်းပမှီ ကစားသမားအားလုံးဟာ ပုံမှန်အတိုင်း ကစားနိုင်ဖို့အတွက် အနည်းဆုံး ၁ လနီးပါး အချိန်ယူရအုံးမှာပါ။ ယမန်နေ့ကတော့ UK အစိုးရဟာ ဘောလုံးသမားများနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စာမျက်နှာ ၇ ရွက်ပါတဲ့ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစည်းကမ်းချက်တွေထဲမှာတော့ ထရိန်နင်းဆင်းမဲ့ ကစားသမားအရေအတွက်နဲ့ ဝန်ထမ်း နာမည်များကို ပြိုင်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေထံ နာမည်စာရင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီး COVID-19 စစ်ဆေးမှုခံယူသွားရမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်ထဲမှာတော့ အရေးကြီးဆုံးတချက်မှာ ထရိန်နင်းဆင်းမဲ့ ကစားသမားများနှင့် နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာ နှာခေါင်းစည်းကို တပ်ဆင်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး ကြုံရာတံထွေးမထွေးဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ အရင်လို အသင်းလိုက် ပြေးလိုက်လွှားလိုက်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပဲ ၅ ယောက်တဖွဲ့နှုန်းနဲ့သာ ထရိန်နင်းဆင်းရပါမယ်။ ၇ မျက်နှာပါဝင်တဲ့ စည်းကမ်းချက်ထဲက တချို့ သိသင့်တဲ့ စည်းကမ်းတချို့ကို...
လမ်းခွဲခဲ့ပေမယ့် အသင်းဟောင်းအပေါ်မှာ ချစ်မြတ်နိုးဆဲဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည့် ပိုချက်တီနို
စပါးစ်အသင်းကို သမိုင်းတစ်လျှောက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်အဆင့်သို့ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သော နည်းပြဟောင်း ပိုချက်တီနိုဟာ အသင်းနှင့် လမ်းခွဲခဲ့ရပေမယ့် စပါးစ်အပေါ်မှာ ချစ်မြတ်နိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုချက်တီနိုဟာ စပါးစ်အသင်းကို ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ (၅) နှစ်ကြာကိုင်တွယ်သွားခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပိုချက်တီနိုလက်ထက်မှာတော့ စပါးစ်အသင်းဟာ EPL ၌ ဒုတိယနေရာကို တစ်ကြိမ်၊ တတိယနေရာကို နှစ်ကြိမ်တိတိရရှိခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက် အာဆင်နယ်ကို ကျော်ဖြတ်ကာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ကိုပါရယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီမှာတော့ ပိုချက်တီနိုဟာ စပါးစ်အသင်းနှင့်အတူ ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး ရလဒ်ဆိုးများကြောင့် နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာတော့ ကတ္တီပါလမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပိုချက်တီနိုဟာ စပါးစ်အသင်းနှင့် လမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်း ဘောလုံးလောကနှင့် ဝေးကွာနေပေမယ့် သူ့ကို ခေါ်ယူချင်တဲ့အသင်းကြီးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နယူးကာဆယ်အသင်းဟာ ပိုင်ရှင်အပြောင်းအလဲကြောင့် ပိုချက်တီနိုကို မက်မောလောက်သည့်လစာငွေပမာဏဖြင့် ခန့်အပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် သတင်းများက ဖော်ပြကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်...
ဘာစီလိုနာအသင်းကြောင့် အနာဂတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာသည့် စပါးစ်ကွင်းလယ်လူ #အန်ဒွန်ဘီလီ
တော့တင်ဟမ်စပါးစ်ကွင်းလယ်လူ တန်ဂေးလ် အန်ဒွန်ဘီလီဟာ ဘာစီလိုနာက စိတ်ဝင်စားသည့် သတင်းများကြောင့် အင်္ဂလန်မြေမှ ထွက်ခွာဖို့ စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်ကွင်းလယ်လူနှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းမှ ဒီသတင်းကို ဖောက်သည်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီး Sky Sports က တင်ဆက်ပေးထားတာပါ။ အန်ဒွန်ဘီလီဟာ မန်နေဂျာသစ် မော်ရင်ဟို နှင့် ပြသာနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိသော်လည်း သူကိုယ်တိုင် အင်္ဂလန်မြေမှာ ရုန်းကန်နေရသည့်အတွက် အသင်းပြောင်းဖို့ စဉ်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့် ဘန်လေနဲ့ပွဲမှာ အန်ဒွန်ဘီလီဟာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်သည့်အပြင် ပြိုင်ဘက်အသင်းကို အခွင့်အရေးပေးမိတာကြောင့် နည်းပြမော်ရင်ဟိုဟာ ပထမပိုင်းအပြီးမှာတော့ သတိပေးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ အန်ဒွန်ဘီလီကိုယ်တိုင်လည်း အဆိုပါပွဲမှ ခြေစွမ်းများကိုစိတ်ပျက်မိကြောင်း ပွဲအပြီးမှာတော့ ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မော်ရင်ဟို နှင့် စပါးစ်အသင်းဟာ ပေါင် ၅၄ သန်းတန် အန်ဒွန်ဘီလီထံမှ အကောင်းဆုံးပုံစံကို မျှော်လင့်လျက်ရှိသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း ဘာစီလိုနာအသင်းမှ ခေါ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားနေသည့်သတင်းများကြောင့် အန်ဒွန်ဘီလီဟာ သူ့ရဲ့ အနာဂတ်ကို စဉ်းစားလာပြီဖြစ်ပါတယ်။...
ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း ဘောလုံးပြန်ကစားဖို့ ဝန်လေးနေကြသည့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှ ကစားသမားများ(ESPN)
ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှ တာဝန်ရှိသူများဟာ ဇွန်လအတွင်း ဘောလုံးပွဲများကို ပြန်လည်စတင်ဖို့ ကြိုးစားပမ်းစား အားထုတ်နေပေမယ့် တကယ်ကစားရမယ့် ဘောလုံးသမားတွေကတော့ ဒီကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ဘောလုံးပြန်ကစားဖို့ကို ငြင်းဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ ESPN သတင်းဌာနက ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုငြင်းဆန်တဲ့ ကစားသမားတွေဟာ တနေ့ထက် တနေ့ တိုးပွားလာသလို၊ ဒီအချက်က ဘောလုံးပွဲများ ပြန်လည်ကျင်းပရေးကို အဟန့်အတားဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပဉ္စမမြောက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ဦးရေအများဆုံးဖြစ်သလို၊ သေဆုံးသူဦးရေမှာလည်း စုစုပေါင်း ၂၁၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသူဦးရေ နှင့် ပိုးတွေ့ လူနာ ထပ်တိုးမလာသော်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်၏ သဘောသဘာဝကြောင့် လုံးဝစိတ်ချလို့မရတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။ နာမည်ကြီး ပြင်သစ်ဘောလုံးလိဂ်နှင့် နယ်သာလန်လိဂ်တို့ဟာ ချန်ပီယံမရှိ၊ တန်းဆင်းသူမရှိပဲ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီကို ပိတ်သိမ်းခဲ့သည့်အပြင် အီတလီသည်လည်း မကြာခင်အချိန်အတွင်း ပြန်လည် ပိတ်သိမ်းဖို့အတွက် စိုင်းပြင်းနေပါတယ်။...
နောက်ရာသီမှာ ပိုချက်တီနိုကို ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပြန်လည်မြင်တွေ့ရဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများနေပါပြီ (Sky Sports)
ဆော်ဒီဘီလျံနာအုပ်စုဟာ နယူးကာဆယ်အသင်းကို ဝယ်ယူဖြစ်ခဲ့ပါက စပါးစ်အသင်း၏ နည်းပြဟောင်း ပိုချက်တီနိုကို တစ်နှစ်လျှင်လုပ်ခလစာ ပေါင် ၁၉ သန်းဖြင့် ခန့်အပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ စပါးစ်နည်းပြဟောင်း ပိုချက်တီနိုဟာ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလကတည်းက နည်းပြလောကနှင့် ခေတ္တကင်းကွာနေတာဖြစ်ပြီး အနားယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နယူးကာဆယ်၏ လက်ရှိနည်းပြ စတိဗ်ဘရုစ်ကတော့ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီကုန်သည်အထိ ဌက်ကျားအုပ်စုကို ဆက်လက်ဦးဆောင်သွားအုံးမှာဖြစ်ပြီး ပိုချက်တီနိုကို ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီမှသာ မြင်တွေ့ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆော်ဒီဘီလျံနာအုပ်စုဟာ မိုက်အက်ရှ်လေထံမှ နယူးကာဆယ်အသင်းကို ပေါင်သန်း ၃၀၀ ဖြင့် ဝယ်ယူဖို့အတော်လေးနီးစပ်နေပြီဖြစ်ပြီး မကြာခင်အချိန်အတွင်း အလွှဲအပြောင်းများကို မြင်တွေ့ရဖို့ရှိပါတယ်။ နယူးကာဆယ်ရဲ့ ပိုင်ရှင်အသစ်တွေဟာ စပါးစ်အသင်းမှာ လူငယ်ကစားသမားများစွာကို (၅) နှစ်စီမံကိန်းဖြင့် အောင်မြင်စွာမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ပိုချက်တီနိုကို အထင်ကြီးလေးစားသလို၊ ခေါ်ယူခန့်အပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ပိုချက်တီနိုသာ အဆိုပါနည်းပြအလုပ်ကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပါက နယူးကာဆယ်ပိုင်ရှင်အသစ်ဟာ တရုတ်ကလပ် ဒါလီယန်ရီဖန့်မှာ...
ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးကို အင်တာမီယာမီသု့ိ ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေသည့် ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း
ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းဟာ သူပိုင်ဆိုင်သည့် မေဂျာလိဂ်ကလပ် အင်တာမီယာမီအသင်းသို့ အေတီကိုမက်ဒရစ်၏ ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး ဒီယေဂိုကော်စတာကို ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ ဘက်ခမ်းဟာ ကော်စတာသာမက ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် ကွင်းလယ်လူ မိုဒရစ်၊ ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွတ်စ်နှင့်အတူ ဘောလုံးလောကမှ နာမည်ကြီး ဝါရင့်ကစားသမားများစွာ ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်။ စပိန်ထုတ်သတင်းစာ မာကာ၏ ဖော်ပြချက်အရ ယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်း ဘက်ခမ်းဟာ ကော်စတာကို ခေါ်ယူဖို့ စတင်ချိတ်ဆက်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီမှာ အေတီကိုအတွက် စုစုပေါင်း ၂ ဂိုးသာ သွင်းယူနိုင်တဲ့ ကော်စတာဟာ ဘက်ခမ်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ရေဒါထဲက ဦးဆုံးပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအခွင့်အရေးဟာ ကော်စတာအတွက်တော့ ငွေကြေးပိုင်းအရ ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းရွှေ့မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့် လက်ရှိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၏ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ဟာ ကမောက်ကမဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အေတီကိုနှင့်လည်း ကော်စတာဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပေသလို၊ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကိစ္စသည်လည်း အခုထိကြန့်ကြာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆီမြွန်ဟာ လက်ရှိရာသီမှာ ကော်စတာကို စုစုပေါင်း...
ပြင်သစ် နောက်ကို အီတလီ လိုက်ဖို့ ဟန်ပြင်နေပါပြီ……..
အီတလီနိုင်ငံ၏ အားကစားဝန်ကြီး ဗင်ဇင်ဇိုစပါဒါဖိုရာက စီးရီအေပြိုင်ပွဲများကို ပြန်လည်စတင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို၊ ပြင်သစ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကဲ့သို့ပင် လက်ရှိရာသီကို အဆုံးသတ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ အီတလီအစိုးရအာဏာပိုင်များဟာ ယခင်က မေလ ၄ ရက်နေ့တွင် ဘောလုံးအသင်းများအားလုံး ထရိန်နင်းပြန်ဆင်းရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့်၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မေလ ၁၈ ရက်နေ့သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း အမိန့်ထုတ်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအမိန့်ထုတ်တဲ့အပေါ်မှာတော့ ကလပ်အသင်းများနှင့်အတူ ကစားသမားများ၊ နည်းပြများအားလုံးက ဒေါသထွက်ခဲ့ကြပြီး စပိန်နိုင်ငံမှာ အသုံးပြုတဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရသည့် Lock Down နည်းစနစ်များကို အတုယူကာ ထိုအတိုင်း လိုက်လုပ်သင့်ကြောင်း ထောက်ပြဝေဖန်ခံကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ အီတလီနိုင်ငံမှာ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကို ပြန်လည်စတင်ဖို့ရာ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကော်မတီ နှင့် FIGC (ဆေးအကူအညီထောက်ပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့) နှင့် ဆွေးနွေးညှိ့နှိုင်းမှုများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဝန်ကြီး စပါဒါဖိုရာကိုယ်တိုင် ဝန်ခံထားပါတယ်။ လုံလောက်သည့် နည်းစနစ် နှင့် ကျန်းမာရေး...